Featured – Page6– Amazing Yangon
This Friday, 26 October, ONE: PURSUIT OF GREATNESS takes place at the Thuwunna Indoor Stadium as national icon and two-division ONE World Champion “The Burmese…
လာမည့်သောကြာနေ့ အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ သုဝဏ္ဏမိုးလုံလေလုံအားကစားကွင်းကြီးတွင် ONE: PURSUIT OF GREATNESS ပြိုင်ပွဲကြီးကို ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကာ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင်ဖြစ်သူ ONE ဝိတ်တန်းနှစ်ခုတွင် ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ “မြန်မာ့စပါးအုံး” အောင်လအန်ဆန်သည် စိန်ခေါ်သူလက်ဘနွန်နိုင်ငံသား Mohammad “O Lutador” Karaki ကို ရင်ဆိုင်ကာ သူ၏…
The One Championship ရဲ့ Limited Edition T-Shirt & Autograph Card ကံထူးရှင်တွေ ထွက်ပေါ်လာပါပြီ… ???ခုလို ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်း amazingyangon မှ အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ လက်ဆောင်တွေ မရခဲ့သူတွေလည်း ထပ်ပြီးလာမယ့် Program တွေမှာ ပြန်လည် ပါဝင်ကြပါဦး။…
? October တလလုံး မည်​သည့်​ Treatment ကို မဆို ဝယ်​ယူသူတိုင်းအတွက်​ ? Additional 50% Gift Card ? လက်​​ဆောင်​ ​ပေး​နေပြီဖြစ်​​ကြောင်း သတင်း​ကောင်းပါးလိုက်​ပါတယ်​​ ??? လှပသောနေ့သစ်များအတွက် The Queen ? #SmileWithHeart ? ?…
အောင်လအန်ဆန် အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိမည်
အောင်လအန်ဆန်သည် အောက်တိုဘာလ ၂၆ရက်နေ့၊ သောကြာနေ့၊ ရန်ကုန်မြို့ သုဝဏ္ဏဘူမိမိုးလုံလေလုံအားကစားကွင်းတွင် ကျင်းပမည့် ONE: PURSUIT OF GREATNESS ပြိုင်ပွဲတွင် မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ကာကွယ်ပွဲအတွက် ခရာခီနှင့် ထိုးသတ်ရန် အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်၊ ၂၀၁၈ (သောကြာနေ့)တွင် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၊ Terminal 1(ပြည်ပဆိုက်ရောက်)၊…
အောင်လအန်ဆန် Vs ခရာခီတို့ ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် ONE Championship Pursuit of Greatness ပွဲမတိုင်ခင် မိတ်ဆက်သော အနေဖြင့် အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့၊ နေ့လယ် ၃ နာရီမှာ စတင်ကာ Junction City ရဲ့ Promotion Area မှာ…
အာရှသမိုင်းတွင် အကြီးမားဆုံး ကမ္ဘာ့အားကစားပြိုင်ပွဲများကို ဦးစီးကျင်းပလျက်ရှိသော ONE Championship™ (ONE) သည် အောက်တိုဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ (သောကြာနေ့)၊ သုဝဏ္ဏဘူမိ မိုးလုံလေလုံအားကစားကွင်းတွင် ကျင်းပမည့် ONE: PURSUIT OF GREATNESS ပွဲအတွက် တွဲဆိုင်း အပြည့်အစုံကို ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်သည်။ အဓိကပွဲစဉ်အနေနှင့် လက်ရှိ…
အာရှသမိုင်းတွင် အကြီးမားဆုံး ကမ္ဘာ့အားကစားပြိုင်ပွဲများကို ဦးစီးကျင်းပလျက်ရှိသော ONE Championship™ (ONE) သည် Sequoia Capital မှ ဦးဆောင်သည့် Series D ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၆၆ မီလီယံနှင့် စာရင်းပိတ်လိုက်ကြောင်း ယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအသစ်များဖြစ်ကြသည့် Temasek၊ Graeenoaks Capital နှင့်…
Sedona Hotel Yangon Brings Together Award-Winning Hawker Chefs from Penang
Sedona Hotel Yangon continues its series of the best dining festivals and experiences in town by hosting the Best of Penang Food Festival at D’Cuisine…
ဆီဒိုးနားဟိုတယ်ရန်ကုန်မှ ပီနန်ဒေသရှိ အကောင်းဆုံး စားသောက်ဆိုင်တန်းများမှ ဆုရ စာဖိုးမှူးများအား ဖိတ်ခေါ်
ဆီဒိုးနားဟိုတယ်ရန်ကုန်မှ ပုံမှန် စီစဉ်ကျင်းပလျက်ရှိသော ရန်ကုန်မြို့တွင်း အကောင်းဆုံး ဟင်းလျာပွဲတော်များအား ဆက်လက် မြည်းစမ်းသုံးဆောင်နိုင်ရန် အကောင်းဆုံး ပီနန် အစားအသောက်ပွဲတော် တစ်ခုကို ဟိုတယ်၏ D’Cuisine စားသောက်ခန်းမတွင် ယနေ့မှ စတင်ပြီး အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပီနန်မြို့ကို မလေးရှားနိုင်ငံ၏ နာမည်ကျော်…
ONE: DAWN OF HEROES ပြိုင်ပွဲမှ အောင်ပွဲရ အားကစားသမားများ၏ နောက်ထပ်ရင်ဆိုင်ရမည့် ပြိုင်ဘက်များ
ရန်ကုန်မြို့တွင် HEINEKEN Myanmar ၏ ရုံးချုပ်အသစ်ကြီးကို ပြောင်းရွေ့ဖွင့်လှစ် အရည်အချင်းရှိလူငယ်များကို ‘Go Places’ တွင် ပါဝင်နိုင်ရန် လက်ကမ်းကြိုဆို
ကိုယ်ခံပညာ သိုင်းပေါင်းစုံ အားကစားက စိုင်းဥာဏ်လင်း ဘဝကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲ စေခဲ့သလဲ